Manatsara ny fakana sary izay alainao amin'ny PC | i Screenzy Famoronana an-tserasera
Hatsarao ny pikantsary miaraka amin'ity mpamoaka an-tserasera maimaimpoana antsoina hoe Screenzy ity
Screenzy dia tonian-dahatsoratra an-tserasera ho an'ny pikantsary izay mamela antsika hanao tweaks mahaliana sasany hahatonga ireo pikantsary ho tsara lavitra noho izy ireo.
Angamba ny lafiny tsara indrindra dia ny fahatsorana sy imediatez hanombohana ny famerenana indray pikantsary na iray aza avy amin'ny Unsplash, tranonkala fakana sary mivelatra.
Tsindrio fotsiny fotsiny amin'ny kisendrasendra ka miseho sary tampoka ary tsy maintsy miroso amin'ny orinasa isika hanombohana ny famerenana azy io. Toy izany koa no hitranga raha mampakatra pikantsary amin'ny Windows isika ary avelantsika miaraka amin'ny alokaloka sy ireo fikitika manokana ireo.
Vantany vao nakarina isika dia hanana ny fidirana an-tsorony ambony amin'ny ankavanan'ny sary an'ny lohateny napetraka eo amin'ny fakana sary sy andiana safidy ho miova loko, gradient loko, saturation, famirapiratana na ny sakany na ny haavony tiantsika hisy eo amin'ny sisin'ny fakana.
Izahay aza manana Bokotra 5 hitehirizana toe-javatra samihafa ary amin'izay dia afaka miverina amin'ny tranonkala isika amin'ny fotoana rehetra mba hametrahana azy ireo anaty jiffy. Ny valiny farany dia azo sintonina ao amin'ny JPEG na PNG, ary hahafahantsika mamindra azy amin'ny asa hafa miaraka amin'ny fakana sary miloko tsara sy miaraka amin'ireo lokon-tserasera manokana ireo.
Screenzy dia a fanompoana tena tsy mitovy amin'ny hitantsika teo aloha ary io dia zavatra miavaka izay mampiavaka azy amin'ireo mpanova sary hafa izay efa hitantsika nipetraka tamin'ireo tsipika ireo. Raha mitady tonian-dahatsoratra ianao hanatontosana ny fandokoana ireo sary ary hitondra azy ireo mivantana any amin'ny Powerpoint na asa iray izay tsy maintsy asehonao dia aza mangataka andro ajanona amin'ny amin'ny alàlan'ny rohy mankany amin'ny Screenzy.
Manoro hevitra izahay mpamoaka horonantsary an-tserasera maimaimpoana ity izany koa manana tombony sasany toy ny katalaogna lehibe ny rakitra multimedia izay handraisana horonantsary avo lenta rehefa amboarina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Hatsarao ny pikantsary miaraka amin'ity mpamoaka an-tserasera maimaimpoana antsoina hoe Screenzy ity
Rehefa tsara kokoa ny sary famantarana ny Lalao Olaimpika Tokyo tsy toy ny ofisialy ofisialy
Camera Raw ho an'ny vao manomboka